ကျောက်စိမ်းအကြောင်းတိုတိုလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျောက်စိမ်းအကြောင်းတိုတိုလေး
Posted by မောင် ပေ on Sep 5, 2011 in Creative Writing, How To.. | 19 comments
အမှာစာ ။ ။ ကျောက်စိမ်းနဲ့ တော့ မဆိုင်ပါဘူး ။ နဲနဲပြောချင်ပါတယ် ။
လူ့ လောက မှာ ၊ မိတ်ဆွေကောင်း ရဖို့ ဆိုရင် ၊ နဲနဲပြောပြီး ၊ များများ နားထောင်ရမယ် တဲ့ ။
ဒါဆိုရင်..ကျွန်တော် အခုပြောနေတာ တွေ က တော်တော်များနေပြီ ။
မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် ။
မဟုတ်သေးပါဘူး ။ ကျွန်တော်က စာရေးနေသူ တစ်ယောက် ဆိုတော့ များများပြောမှ ဖြစ်ပါမယ် ။
များများရေးမှ ၊ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ကို ကိုယ့်စာဖတ်တဲ့သူ သိပါမယ် ။
အပြင် လက်တွေ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ် မှာတော့ နဲနဲပဲ ပြောပါတယ် ။ လိုတာလောက်ပဲ ပြောတတ်ပါတယ် ဗျာ ။
ပညာတစ်ခု ဆိုတာ စာတွေ့ ၊ လက်တွေ့ရှိတာ ကို စာဖတ်သူများ သိပြီးသားပါ ။
သို့ သော် စာထဲ က နဲ့ လက်တွေ့ နဲ့မတူညီ တာတွေ လည်း အများကြီးဆိုတာ စာဖတ်သူများ သိပြီးသားပါ ။
ကျောက်စိမ်းပညာ စာတွေ့ ကတော့ ၊ ကိုယ်ခံ ပညာ သင်ယူ တာနဲ့ တူပါတယ် လို့ ထင်ပါတယ် ။
တစ်ကယ် လက်တွေ့ လုပ်တဲ့ အချိန် က တော့ ၊ တိုက်ပွဲပေါ့ ဗျာ ။
တိုက်ပွဲထဲ မှာကြ ကိုယ်တတ်သမျှ ၊ သိသမျှ ၊ သင်ထားသမျှ ပညာစုံ ထုတ်သုံး မှ အောင်မြင်မှု ကို ရရှိမှာပေါ့ ။
စာတွေ့ သို့ မဟုတ် ၊ ဘာမှ မသိထားပဲ ၊ ကျောက်စိမ်း အရောင်းအဝယ် လုပ်လို့ မရဘူး လို့ကျွန်တော် မပြောဘူးနော် ။
မသိ မတတ်ပဲ လုပ်လို့ ရမှာပါ ။ လုပ်ရဲသူတွေ လဲ လုပ်နေမှာပါ ။ ရလဒ် ကိုတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး ။
ကျွန်တော် က တော့ မသိမတတ်ပဲ မလုပ်ရဲ လို့ ၊ လေ့လာသင်ယူ စမ်းလုပ်နေတုန်းပါ ဗျာ ။
ကဲဗျာ ပေလည်းတော်တော်ရှည်နေပြီ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် ပို့ စ် က စာဖတ်သူ ကို တစ်ခုခုပေးခဲ့မယ် ဆိုရင် ၊ ဝမ်းသာကျေနပ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် ရေးတင်တဲ့ ကျောက်စိမ်းအကြောင်းနဲနဲလေး ပို့ စ်အားလုံး နဲ့ကျွန်တော့် ကို ကျောက်စိမ်းပညာ ဆရာစား မချန်သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးစန်းဌေး ကို ပူဇော်ပါတယ်)
ကျောက်စိမ်း အတု နဲ့ အစစ် ခွဲခြား ပုံ လေး ပြောပြချင်ပါတယ် ။
အပြင် လက်တွေ့ လောက မှာ ၊ တစ်ကယ် ကျောက်စိမ်းရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ သူတွေ ကို သွားမေးကြည့်ရင် ၊ အဖြေ ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး ။
သူတို့ အနှစ်နှစ် ကာလ လုပ်ကိုင်ရှာဖွေ ထားတဲ့ အတွေ့ အကြုံ ကို လွယ်လွယ် ပြန်ပြောချင် ကြ မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ပြန်ဝေမျှ တဲ့ သူ လည်း ရှိမှာပေါ့ ။
နောက်ပြီး…သူတို့ ကိုယ်တိုင် သိမယ် ၊ မသိဘူး ဆိုတာ မသေချာပါဘူး ။
တစ်ကယ်လို့ ကျောက်ဝိုင်း ထဲ ရောက်လို့၊ ကိုယ်သဘောကျ မိတဲ့ ကျောက် ကို တွေ့ ပြီ ဆိုပါစို့ ဗျာ ။
ဈေးက လည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဈေး တည့်ပြီ ပေါ့ ။ နောက်ဆုံး ငွေမချေခင် မှာ တစ်ချက်လောက် ပြန်စစ်သင့်ပါတယ် ။
ကိုယ် ဝယ်မဲ့ ကျောက် က တစ်ကယ် ကျောက်စိမ်း စစ်ရဲ့ လား ဆိုတာ ကို ။
ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ ဆိုတော့ ။
ရေ အနည်း ငယ် ယူလိုက်ပါ ။
ကျောက်စိမ်းတုံး အခွံ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဖြတ်ထားတဲ့ အသားပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကို ၊ အပေါ် ကနေ ရေစက်ကလေး တွေ တစ်စက်ချင်းစီ ချကြည့်လိုက်ပါ ။
ရေစက်ကျ နေတဲ့ အချိန်မှာ ၊ ကျတဲ့ နေရာ ကို သေချာကြည့်ပါ ။
ကျောက်စိမ်း အစစ်ဆိုရင် ၊ ကိုယ်လောင်းချလိုက်တဲ့ ရေစက် ကို စုပ်သွားပါလိမ့်မယ် ။
အတု ဆိုရင်တော့ ရေမစုပ် ဘဲ ၊ ရေ က လျှောကြ သွားပါလိမ့်မယ် ။
ဖြတ်ထားတဲ့ အသားကို လောင်းကြည့်ရင် လည်း ဒီနည်း အတိုင်းပါပဲ ။
ရေစုပ်သွားလို့ အကွက်လေး ဖြစ်လာတာ ကို ပါ မြင်ရပါတယ် ။
အရင်ပို့ စ် မှာ ၊ ကိုဇော်မင်း က မေးထားတာ ရှိပါတယ် ။
သူ့ မေးခွန်း က
“ ဖြတ်သားမဟုတ်တဲ့ အချော၊သွေးပြီးသားရောင်းတန်းလုပ်နေတဲ့ ကျောက်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်ပါသလဲ…ဥပမာဗျာ…ခင်ဗျားပြောတဲ့ ချယ်ဆီး ကာလာ ဖေးတာမရှိဘူးပေါ့ဗျာ..သာမာန်မျက်စိ(သို့) ရိုးရိုးမှန်ဘီလူးနဲ့ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်ပါသလဲ… ” တဲ့
အပွင့် ကို ပြောတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ များသော အားဖြင့် အပွင့် ကို ဆေးဆိုးရောင်းကြတာ များလို့ ပါ ။
ကျောက်ဝိုင်းတွေ မှာ မကြာခဏ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာပါ ။
ဆေးဆိုးထားတဲ့ အတုကို ချဲဆီးဖီလ်တာ မသုံးပဲ ခွဲပုံ ခွဲနည်းတွေ က တော့
ရေနွေးပူပူလေး နဲ့ လောင်းကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် ။ ဆေးကျွတ်နိုင်ပါတယ် ။ ရေကတော့ တော်တော်ပူရပါမယ် ။
နောက်ပြီး နဲနဲပြင်းတဲ့ အက်ဆစ်နဲ့ လောင်းကြည့်ရင် လဲ သိနိုင်ပါတယ် ။ ဆိုးထားသမျှ ဆေး အကုန် ကျွတ်သွားပါမယ် ။
နောက်ပြီး ဆေးဆိုးထားတဲ့ ကျောက်မှာ အနာ (သို့ မဟုတ်) အက်ကြောင်း ပါခဲ့မယ် ဆိုရင် ၊ အဲဒီ အနာ (သို့ မဟုတ်) အက်ကြောင်းထဲ ကို ကျောက်ကြည့် မှန်ဘီလူး( အဆ၃၀) နဲ့သေချာကြည့်ရင် ဆေးဖတ်တွေ တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။ သာမန် မျက်လုံး နဲ့ နေရောင်ပြင်းပြင်း အောက်မှာ သေချာ ကြည့်ရင် လဲ တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။
ကျောက်ပွင့် ၅ ပွင့် ဝယ်မယ် ဆိုပါစို့ ။ ချဲဆီးဖီလ်တာ မပါဘူး ။ မှန်ဘီလူး မပါခဲ့ဘူး ဆိုရင် ။
တစ်ပွင့်ချင်းစီ ကို သေချာ လက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်ပါ ။
အလေးချိန် ကို စိတ်မှန်းနဲ့ ချိန်ဆ ကြည့်ပါ ။
ကျောက်စိမ်းဟာ အလေးချိန် စီးပါတယ် ။ သာမန် ဆေးဆိုးထားတဲ့ အခြားကျောက်ထက် ပိုလေးပါတယ် ။
၅ ပွင့်ထဲ မှာ မှ ၁ ပွင့် က ကျန်လေးပွင့် ထက် ပေါ့နေတာ ကို ခံစားရမယ် ဆိုရင်တော့ ။
အဲဒီ တစ်ပွင့် ကို ရှောင်ရတော့မှာပေါ့ ဗျာ ။
အကောင်းဆုံး က တော့ ချဲဆီးဖီလ်တာ ပါပဲ ။
သူပါရင်တော့ အလွယ်တကူ ထုတ်သုံးပြီး ကြည့်လို့ ရတာပေါ့ ။
သူ နဲ့ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ၊ ချက်ချင်း အရောင်ပြောင်းသွားတာ ကို တန်းသိရမှာပါ ။
ကျောက်စိမ်း အစစ်ဆိုပေမယ့် ချဲဆီးဖီလ်တာ နဲ့ ကြည့်ရင် အရောင်ပြောင်းတဲ့ ခန္တီးကျောက် နဲ့ ပူတာအို ကျောက် တို့ အကြောင်း ကို တော့ ရှေ့ ပို့ စ်မှာ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ ။
တစ်ကယ့်တစ်ကယ် အရောင်းအဝယ် လုပ်မယ့်နေရာ မှာ ၊ ကိုယ်ဝယ်မယ့် ကျောက်ကို ရေပူ လောင်းဖို့ ၊ အက်ဆစ် နဲ့ လောင်းကြည့်ဖို့ ဆိုတာ ၊ မလွယ်ကူပါဘူး ။
ရောင်းမယ့် သူ က လည်း ဘယ်လက်ခံ ချင်မလဲ နော ။ သူ့ ကျောက် ကို အက်ဆစ်သွားလောင်း ရင် ပြဿနာ တက်နိုင်ပါတယ် ။
လောင်းကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တောင် ။ သူ လစ်မှ စမ်းသင့်ပါတယ် ။
လဘက်ရည် ဆိုင် နဲ့ နီးရင်တော့ ၊ ရေနွေးပူပူ ရဖို့ အဆင်ပြေမယ် ဆိုရင်တော့ ..
ရောင်းမယ့်သူ ကို ခွင့်တောင်းပြီး ၊ လောင်းကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် ။
မှန်ဘီလူး(အဆ၃၀) ကိုလည်း ၊ ကျောက်စိမ်းရောင်းဝယ် လုပ်မယ့်သူတွေ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ် လို့ အကြံလေး ပြုပါရစေ ။
လောင်းချင်လို့ ရေနွေး ပူပူပွက်ပွက်တွေ အမြဲတမ်းထားရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်…. လောင်းတော့လောင်းချင်တယ် ကျောက်ကိုတော့မဟုတ်…
“ဒီလိုဆိုရင်” ပို့ စ်ထဲ က လူတွေ ကို
လောင်းချင်နေတာ ထင်ပါရဲ့ 
လောင်းချင်ရင်..ကျောက်သထေး ဖြစ်မှ လောင်း…
အဲတာမှ…ကျောက်လေးဘာလေး အမွေရမယ်..ကွဲ့ 
ဟယ်တော့ .. မမ မနောတို့ ……. ချက်ချင်း သူငယ်ပြန်သွားပြီ .. သားရေတွေကျ ၊ သွားတွေ ကျိုးလို့ .. စကားတောင် မပီတော့ဘူး … ဟားဟား … :D :D :D
ဒါဆိုလည်း သက်မိန်.ပေးလိုက်ပြီ သက်စေ
မသက်ရသေးခင် ရွာထဲက ရတဲံ.ငွေ ကျနော်.ကို လွဲခဲ.နော်
ရေစက်ကလေးချပြီး စစ်ဆေးတဲ.နည်း လေးတော. ကောင်းတယ်ဗျ
ကျနော်.လို လူပြိန်းတောင် နားလည်တယ် ကျေးဇူးကို ကိုပေ
အမှန်တကယ် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စေ…မိမိတကယ်လုပ်စားတော့မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်စွာနားလည်တတ်သိထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ……….
အဖိုးတန်ရတနာတွေရှိရဲ့သားနဲ့ ပြည်သူတွေဆင်းရဲတွင်းနက်နေတာက ရင်နာစရာပါပဲ….
လက်လှမ်းမမှီသေးတဲ့ ကိတ်စတွေမို့ မှတ်ရုံဘဲမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ နောက် ကိုယ်ပိုင် ကျောက်စိမ်းဝယ်နိုင်ရင် ရေနွေးပူပူနဲ့ အားရပါးရ လောင်းချပါအုံးမယ်။( ရွှေဆိုင်တွေမှာ ရွှေကွပ်ပြီးသား ကျောက်စိမ်းတွေကိုတော့ ရေနွေးလောင်းလို့ မရဘူးပေါ့နော်။) :D
အပြေးသွက်ဖို့ ပဲ လိုပါတယ်
ကျုပ်ကကျောက်အကြောင်းတော့.. သိပ်နားမလည်ဘူး.. ဒါပေမဲ့.. လောကဓါတ်ပညာတော့ နည်းနည်းလေ့လာတီးခေါက်မိတယ်..။
ရေစက်ချလို့ ရေကို စုပ်ယူလိုက်တဲ့အဓိပ္ပါယ်က.. အဲဒီအသားက ရေစုပ်ယူနိုင်လောက်အောင် ပွနေ(မကျစ်လစ်)နေလို့ပဲဖြစ်မယ်..။ ကျောက်အသားတွေကြားထဲ.. လေဟာနယ်ကွက်လပ်ရျိတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်နေတယ်..။
ဟားဟားဟား…လက်တွေ့ဝါဒီ သိပ္ပံပညာရှင် သဂျီးကွ၊ မဖြေနိုင်ရင် ပေးထားတဲ့ ပွိုင့်အကုန်သိမ်းပြီး ရွာပြင်မှာ ထိပ်တုံးခတ်မယ်။ သဂျီးဆိုရင် ရေလည်းစုပ်၊ လေလည်းစုပ်၊ အရက်ဘီယာတင်မက စုပ်လို့ရတာအကုန်စုပ်တယ်။ အိမ်မှာဆို သူ့ခလေးငယ်ငယ်က စို့တဲ့ ချိုမိုင်မိုင်ဗူးတောင် ဖွက်ထားရတယ်။
အရင်ရက်တွေ က အွန်လိုင်းတက်ချိန်နည်းတာရယ်
တက်တဲ့အချိန် ကွန်နက်ရှင် မကောင်းတာရယ်နဲ့ 
ဒီကွန်မင့် ကို အခု မှ ရေးဖြစ်တယ်
ရေစက်ချရင် ရေစုပ်တယ် ဆိုတာ
ကျောက်စိမ်းအခွံ မှ ပါ
ကျန်တာ တော့ မစုပ်ပါဘူး
အခု ခေတ်ကြီးက အင်တွေ အရမ်းထုတယ်
သောင်းချီ သိန်းချီ လောက်ကို မထုဘူး ဗျ
သန်းချီ ကုဋ္ဌေချီ ကို မှ ထုတာပါ
ကျွန်တော် တော့ ကျောက်စိမ်းလိုင်းထဲ မှာ
အောင်မြင်မှု ရဖို့ ဆိုတာလည်း
ကြိုးစားနေရတယ် ဗျို့ 
ကျွန်တော် က ဘူမိဗေဒ ကို နားမလည်တဲ့ အတွက်
သိပ်သည်းဆ တွေ နဲ့ ရှင်းမပြနိုင်တာ ကို
windtalker အပါအ၀င် ..စိတ်ဝင်စားသူတွေအကူအညီရအောင် ရှာရတာလေး.. ပေါင်းထည့်လိုက်ပါတယ်..။
Jade isabeautiful stone that can be green, orange, or white. If you are about to go shopping for jade or have an old piece of jade, here is an article that will help you tell if you have found the real thing.
1. Become familiar with real jade. Only jadeite jade and nephrite jade are authentic jade.
75% of the world’s jade come from the mines of British Columbia in the form of nephrite, but that’s also mined in Taiwan, the United States and (in small amounts) Australia.
2. Become familiar with imitation jade. Materials passed off as jade include:
In New Zealand Greenstone or Pounamu is highly regarded by Māori. Māori people recognize four main types of pounamu, identifying their color and translucence: kawakawa, kahurangi, īnanga. These are all nephrite. They also regardafourth type of pounamu – tangiwai- from Milford Sound which, although prized, is actually bowenite and authentic jade in the eyes of the rest of the world.
Chrysoprase (“Australian jade” – most of it comes from Queensland, Australia)
Opaque dolomite marble (“Mountain Jade” – from Asia, dyed in vibrant colors)
3. Irregularities indicate that it is probably real
Irregularities indicate that it is probably real
Hold it up toabright light. If possible, examine the internal structure witha10X loupe. Can you see little fibrous or granular, felt-like, asbestos-like intertwinings? If so, it’s probably genuine nephrite or jadeite. Chrysoprase, on the other hand, is microcrystalline, so it’ll look homogenous.
If you see anything resembling layers with the 10X loupe, you’re probably looking at jadeite that’s been “doubled” or even “tripled” (thin layer of gem-quality jadeite sometimes glued overadifferent base).
4. Observe the density. Both jadeite and nephrite haveavery high density (jadeite – 3.3; nephrite – 2.95). Density is measured by dividing the weight (in grams) by the volume (c.c.).
5. Jade should be cold and stay cold forabit.
Jade should be cold and stay cold forabit.
6. Performascratch test. Jadeite is very hard; it will scratch glass or even metal. Nephrite, however, can be much softer, so performingascratch test improperly may damageagenuine piece.
Use the blunt end ofapair of scissors and gently press down and drawaline on an area on the jade piece that is not visible (bottom or end of the piece).
Avoid any weathering surfaces because these are much softer and can be easily damaged. If the scratch makesawhite line, gently wipe it off (it might be metal residue from the scissors). Is there stillascratch? If so, it’s probably not authentic jade.
7. Look for other deceptive practices. Even if you have real jade in your hands, it can still be treated by dyeing, bleaching, use of stabilizing polymers, or creating jade doublets and triplets. Jade is divided into three categories based on these possibilities:
Type A – Natural, untreated, undergoesatraditional process (plum juice washing and polishing with beeswax), no “artificial treatments” (e.g. high temperature or high-pressure treatments). This hasa“true” color.
Type B – Chemically bleached to remove impurities; injected with polymer with the use ofacentrifuge to enhance translucency; covered with hard and clear plastic like coating. Subject to instability and discoloration over time because polymer gets broken down by heat or household detergent; nevertheless, still 100% real jade with 100% natural color.
Type C – Chemically bleached; dyed to enhance color; subject to discoloration over time due to reaction with strong light, body heat or household detergent.
Gather the Things You’ll Need as outlined below.
Lift the spring scale by its top handle and write down the weight of the jade item in air. (Note that this should beascale based on grams and therefore measuring force in dynes – c.g.s system.)
Gently place the jade item completely into the water bucket and write down its weight in water. The clamp can touch the water; it shouldn’t significantly affect the weight.
If you’re concerned, however, use one of the alternatives described above. Since the test is based on the difference in weight, as long as the string, band or pony tail holder remains on the jade both in the air and in the water, the difference will be the same.
Calculate the density of the jade item: mass in air divided by volume. Jadeite hasadensity of 3.20-3.33 g/cc, while nephrite hasadensity of 2.98 – 3.33 g/cc.
If you really love jade and want high quality pieces, the piece you purchase should be accompanied byalab certificate verifying that the piece is “A” quality. Most established, high end retail jewelers only sell A quality.
If there are air bubbles in the jade, it is not real.
Ancient jade pieces are usually unique. If you seeadealer selling many designs that look similar, this isared flag. Ask plenty of questions, and requestacertificate of authenticity.
Withascratch test, you can destroyaperfectly good piece of nephrite jade.
Never doascratch test onapiece you don’t own. If you damage the piece, you will be forced to pay damages. Be sure to clean it with alcohol before you start.
For the density test:
↑ 2.0 2.1 http://www.colored-stone.com/stories/may01/jadegemid.cfm
↑ 3.0 3.1 http://reviews.ebay.com/Bidding-on-Ancient-Chinese-Jades_W0QQugidZ10000000000855969
↑ 6.0 6.1 6.2 http://www.jademart.com/type.htm
↑ eBay Guide – Jade density test
သို့ သော် ဘိရုမာလေးလို ရေးပေးရင်
အတိုင်းအထက် အလွန် အဆင်ပြေမယ် ဗျို့ 
အင်းဂလိ ကို ကောင်းစွာမကျွမ်းကျင်တဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ 
ကျွန်တော့်လိုမျိုး စာဖတ်ပရိသတ် များအတွက် ပါ ။
ငါတို့ သဂျီးကတော့ မိတ်အင်ဒီတင် ဖြစ်နေပြီ။ မောင်ပေကို ထောက်ခံပါတယ်။
ye htikeaung says:
ကျွန်တော် တစ်ခုသိချင်တာလေး မေးချင်တယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်လည်း အစိမ်း ကိုစိတ်ဝင်စားလို.ပါ..
အပွင်. လိုင်းမှာပဲဆိုပါတော.ဗျာ.. ကြားဖူးတာက ကျောက်ကောင်းတစ်ပွင်.က အရည်၊ အသား ကောင်းရမယ်လို. ကြားဖူးတယ်ဗျ
ဒီတော. ကျွန်တော်သိချင်တာက အရည်.. ဆိုတာဘာလဲ ? အသား ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ၊ ဘယ်လိုခွဲခြားတာလဲ သိချင်တာပါ. ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဗျာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ